बुटवलमा विपीसँगको त्यो पत्रकार सम्मेलन
२०३६ सालको जनमत संग्रह भन्दा केही अघि बिपी कोइराला बुटवल आउनुभएको थियो । त्यसबेला बुटवलमा पत्रकारहरुसँग भेटघाटको कार्यक्रम पनि तय भयो । विहान ९ बजे सुर्यप्रसाद प्रधान कहाँ विपीसँग भेट्न कार्यक्रम थियो । त्यस अघि ७–८ बजेतिर हामी पत्रकारहरु एक ठाउँमा जम्मा भयौं । बुटवलबाट प्रकासित हुने एक्सरे साप्ताहिकका सम्पादक बसन्तध्वज जोशी, काठमाण्डौबाट निस्कने जागृती साप्ताहीका सम्बाददाता डिल्लीप्रसाद आचार्य, रासस अञ्चल कार्यालयका अधिकृत नारायण कार्की (हाल पोखराबाट बीबीसीमा कार्यरत) र म सहित चार जना थियौं ।
हामीले विपीसँग कुरा गर्न प्रश्न बनाउन खोज्यौं । के बनाउने कसो गर्ने अलमल भइरहयो । एकले अर्कोलाई अनि अर्कोले अर्कालाइ प्रश्न बनाउन भनिरहयौं । नारायणजीलाई भन्दा ‘विपीको अगाडी मेरो त हिम्मत नै हुँदैन म पहिलो चोटि हो यस अघि म यस्तोमा परेकै छैन ।’ भन्नुभयो । बसन्तजीले त्यही भन्ने । डिल्ली प्रसाद आचार्यले ‘उसले उसले भनेर हुँदैन । अर्जुन तिमि साहित्य तिरको मान्छे विपीसँग कुरा सुरु गर ।’ भन्नुभयो ।
‘सुरु त म गर्छु तर तपाईहरुले अगाडी बढाउनुपर्छ ’ भन्ने सहमती भएर हिडीयो । प्रश्न चाँही बन्न सकेन । विपीलाई भेट्न नजान पनि भएन समय दिइसकेका छौं, इज्जतको सवाल छ । भेट हुन १५ मिनेट जति बाँकी थियो । मैले सोंचे ‘केही त गर्नै पर्यो ।’ सरस्वतीले साथ दिए कि के हो ? बाटोमा जाँदा जाँदै मलाई एक–दुइ वटा प्रश्न मनमा आयो । सुर्यप्रसाद प्रधान कहाँ पुगेर विपीको अगाडी बसियो । चट्ट बाँयाकाटें दौरा लगाउनुभएको, फ्रेन्चकट दाह्री छ, अग्लो मान्छे । हामीलाई वीपीको अगाडी बोल्नु मात्र होइन प्रश्न गर्नु छ । ‘प्रश्न नै तिम्रो ठीक छैन’ भनेर विपीले भन्ने हुन् की भनेर मलाई डर छ । बडा दहकस भयो । त्यसपछि मैले हिम्मतका साथ पहिलो प्रश्न उहाँलाई गर्न खोजें । त्यतीखेर नेपाली कांग्रेस पञ्चायतमा प्रवेश गर्ने भन्ने खालका हल्ला पनि चलेको थियो । तर गरेका थिएनन् । ‘पञ्चायतले एउटा चुनाव चिन्ह दिन्छ भने बर्गिय संगठनको सदस्यता लिनुपर्दथ्यो । बर्गिय सदस्यता लिएर भएपनि चुनावमा जान............... ।’ भनेर करिब–करिब भन्न थालिसकेको थिएँ रोकिएँ । त्यसपछि अर्कै तरिकाले सोधेंं “विपीबाबु नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी चुनावमा जाने कुरा के फरक पर्दथ्यो । तपाईहरुको यस्तो चर्चा आएको थियो । आखिरमा चुनावमा किन जानुभएन ।” भनेर मैले विपीलाई सोंधें ।
प्रशन्न भएर उहाँले भन्नुभयो “हेर्नुस अहिले तपाइँहरु जुन घरमा आउनुभएको छ । घरको ढोकामा अनुमती विना प्रवेश निषेध लेखेको छ भने तपाई सज्जन हुनुहुन्छ भने अनुमती नलिइकन आउनुहुन्न । दुर्जन हुनुहुन्छ भने मात्र आउनुहुन्थ्यो । हामी सज्जन थियौं । अनि प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा चोरबाटो किन जाने ? हाम्रो मुलबाटो नै छदैछ । त्यसैले हामीले भाग लिएनौं ।” भनेर भन्नुभयो । प्रश्नको उत्तर पाइसकेपछि विपीसँग प्रस्तुत हुने मेरो भय छर्लंग हट्यो । अब ढुक्कसँग कुरा गर्न सक्ने भएँ । त्यसपछि दोस्रो प्रश्न पनि मलाई याद छ ।
विपीले त्यसबेला कम्युनिष्टहरुलाई असाध्यै गाली गर्ने । त्यही मेसोमा मैले प्रश्न गरें “मुलुकमा जनमत संग्रह भइरहेको छ । कम्युनिष्ट र कांग्रेसहरु एक हौं, जनमत संग्रहमा जाउँ बहुदलीय शासन व्यवस्थाले जित्छ भनेर कम्युनिष्टहरुले भनिरहेका छन् । आम जनताहरुको त्यही भावना छ । तपाई चाँही कम्युनिष्टसँग एकता गर्दिन भन्नुभएको छ । यसो किन गर्नुपरेको छ र” भनेर मैले विपीलाई सोधें । उहाँले पनि त्यसको जवाफ यती मज्जाले दिनुभयो ।
“हेर्नुस मैले कम्युनिष्टसँग एकता गर्दिन भनेको होइन बहुदलबादी जोसुकैसँग गर्छु । तर १७ वटा पार्टी छ कम्युनिष्टका कोसँग एकता गर्ने ? एउटासँग गरे अर्को रिसाउँछ । त्यसैले मैले मनमोहनजीलाई भनेको छु । एउटा बाममोर्चा बनाउनुहोस । अनि त्यससँग संयुक्त मोर्चा बनाम र जनमत संग्रहमा जाम । उहाँ लाग्नुभएको छ र बाममोर्चा बन्दै छ । बाममोर्चा मार्फत कम्युनिष्टहरुसँग एकता हुन्छ र एक भएर हामी बहुदलमा जान्छौ । चिन्ता नगर्नुहोस ।” भनेर उहाँले भन्नुभयो ।
त्यो भेटघाटलाई अहिले पनि म पत्रकारीताको अर्थमा गाइडलाइनका रुपमा सम्झन्छु । र मेरो जिवनमा बेग्लै खालको एउटा स्मरणीय घट्ना पनि हो । मैले पढ्दाखेरीको विपी र भेटहुँदाको विपीमा अन्तर पाइन । एउटा सौम्य मूर्ति जस्तो लाग्यो । अहिले सम्झदाँ त मलाई विपी एउटा दुर्लभ नेता जस्तो लाग्छ । यद्यपी म पुष्पलालको स्कुलीङको मान्छे हो । विपीलाई उतीखेर राम्ररी चिन्न सकिएको रहेनछ । विपीका साहित्य र उहाँका डायरीहरु पढे पछि अझ बढी प्रभावित हुँदै गइयो । झन पछि झन विपी महान रहेछन् भन्ने बुझ्दै गएँ । (कुराकानीमा आधारीत)
प्रकाशित मिति: बुधवार, पुष १६, २०७६, ११:४५:१६
के हो ‘लकडाउन’ ? ‘लकडाउन’मा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ?
प्रदेश ५ मा १० करोडको कोरोना नियन्त्रण कोष स्थापना
जिल्लाबाहिर यात्रुबाहक गाडी जान नपाउने, निजी गाडीले सवारी बोके कोरोना सचेतनामा खटाइने
वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन-विदेशबाट आउनेको निगरानी गर्नु
आइतवार, चैत्र ९, २०७६ लुम्बिनी टाइम्स
बुटवल-बुटवलमा कोरोना भाइरस प्रकोपको पूर्वतयारी स्वरुप निर्माण गरिएको आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा धागो कारखानाका बन्द रहेका भवनमा आइसोलेसन अस्पताल तयार पारेको हो। पुरा पढ्नुहोस्
बुटवल–बुटवलको लुम्बिनी बस टर्मिनल अर्थात बुटवल बसपार्कमा केही दिन यता यात्रुहरुको चाप दशैंको बेला जस्तै छ। माध्यमिक शिक्षा परिक्षा एसइइका साथै विश्वविद्यालयका सबै परिक्षा स्थगित भयो। सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भए। पुरा पढ्नुहोस्